လွယ်ကူသော Stuffing စာရွက် - ချက်ပြုတ်နည်းများ
ရောနှောဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့ tater tot casserole
လွယ်ကူသော Stuffing စာရွက်
ဒါ လွယ်ကူသော Stuffing စာရွက် မဆိုမုန့်ညက်အကြောင်းကိုဖြည့်စွက်မည်! ဆလရီ၊ ကြက်သွန်နှင့်ထောပတ်တို့ကိုပေါင်ခြောက်သောပေါင်များဖြင့်လွှင့်ပစ်သည်။
ငါချစ်ငါ့ကိုမှားယွင်းတဲ့မရကြဘူး အာလူးကြော် အာလူးတွေအတွက်အိမ်လုပ်တဲ့နေရာအမြဲတမ်းသိမ်းလိမ့်မယ်။ ငါမုန့်ညက်တိုင်းအဘို့အ stuffing ကိုစားနိုင်!
တူရကီ Stuffing လုပ်နည်း
Stuffing ဆိုတာရုံးပိတ်ရက်ဒါမှမဟုတ် Thanksgiving spreads မှာအရေးအပါဆုံးဟင်းပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်။ အတူတူအမှုတော်ကိုထမ်းရွက် အစိမ်းရောင် bean ကို casserole , ချိုသောအာလူး mashed , ကြက်ဆင်, ကြက်ဆင်ဟင်းရည် (သင်တန်း), နှင့်ပတ်သက်။ မမေ့မလြော့ပါ ဖရုံသီးပိုင် အချိုပွဲအတွက်!
အချို့သော stuffing ချက်ပြုတ်နည်းများတွင်မုန်လာဥ၊ စပျစ်သီးပျဉ်သို့မဟုတ် cranberries ခြောက်စသည့်အရာများပါဝင်သည်။ ဤအရာအားလုံးသည်အလွန်ကောင်းသောဖြည့်စွက်မှုများဖြစ်နိုင်သော်လည်းဤဂန္ထဝင်ထည့်ထားသောစာရွက်နှင့်ဘာမျှမနှိုင်းယှဉ်ပါ။
မြေပဲထောပတ်စာရွက်မပါဘဲမုန့်ဖုတ် cookie ကိုမ
ကြက်ဘဲ ဒီကြက်ဆင် stuffing စာရွက်အတွက်အကောင်းဆုံးအမွှေးအကြိုင်ရောစပ်သည် (နှင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းစဉ်အတွင်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်ရောင်းချနိုင်)! သငျသညျကြက်ဘဲရာသီတစ်ခါမှမသုံးဖူးလျှင်, ကပညာရှိ, သမင်နှင့် Rosemary တူသောမွှေးကြိုင်သောရောနှောင်ဟင်းချို, စွပ်ပြုတ်နှင့် casseroles မှအရသာအရသာကထပ်ပြောသည်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်နံ့သာမျိုးကိုသုံးနိုင်သည် (သို့မဟုတ်လုပ်နိုင်သည် အိမ်လုပ်ကြက်ဥရာသီ ), ငါပညာရှိ stuffing အတွက်အသုံးအများဆုံးအမွှေးအကြိုင်ဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။
la မင်းကြီးသည်နှေးကွေး cooker ကြက်သား
ကောင်းမွန်သောဂန္ထဝင်ထည့်သွင်းရန်လှည့်ကွက်မှာဟင်းရည်မထည့်မီသင်၏ပေါင်မုန့်သည်ခြောက်သွေ့အောင်သေချာစေသည်။ သင်သည်ရက်အနည်းငယ်စော။ သင်၏ပေါင်မုန့်ကို ၀ ယ်ပါက၎င်းကိုဖြတ်ပစ်ပါသို့မဟုတ် Cube ထဲသို့ခုတ်ဖြတ်ပါ။ သင်၏ကောင်တာပေါ်ရှိရက်အနည်းငယ်အတွင်းပန်းကန်လုံး၌ခြောက်သွေ့စေပါ။ ဘယ်မုန့်မျိုးမဆိုငါအညိုရောင်နဲ့အဖြူရောင်တွေသုံးလေ့ရှိတယ်။
ဖြစ်စဉ်တစ်ခုတွင် ၁၀ မိနစ်ခန့်ခြောက်သွေ့စေရန်ခြောက်သွေ့ရန် ၃၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိလတ်ဆတ်သောပေါင်မုန့်တုံးများကိုမီးဖို၌ကပ်လိုသည်။ သင်ကလတ်ဆတ်သောပေါင်မုန့်ကိုမီးဖို၌ခြောက်သွေ့စေလျှင်၊
ကျွန်ုပ်၏ပစ္စည်းပစ္စယများကို (ကနည်းပညာအရ ၀ တ်စားဆင်ယင်ဖြစ်စေသည့်) casserole ဟင်းပွဲတွင်ချက်ပြုတ်ရန်သို့မဟုတ်လုပ်လိုသည် Crock Pot Stuffing ။ ကြက်ဆင်ချက်ပြုတ်ခြင်းနှင့်သီးခြားစီထုပ်ခြင်းတို့သည်သူတို့နှစ် ဦး စလုံး overcooking မပါဘဲမှန်ကန်သောအပူချိန်သို့ရောက်အောင်သေချာစေသည်။
Stuffing များကိုကြိုတင် ပြုလုပ်၍ ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် casserole ပန်းကန်ထဲထည့်နိုင်သည်။ ကြက်ဆင်တစ်လုံးကိုကျပ်နေလျှင်၊ အသားသည်အခန်းအပူချိန် (သို့) အေး။ မကြေမီအထိကြက်ဆင်တွင်မထည့်သင့်ပါ။
သင်သည်သင်၏ကြက်ဆင်ပစ္စည်းပစ္စယပြုလျှင်, ထိုပစ္စည်းပစ္စယပထမ ဦး ဆုံးအအေးဖို့သတိရပါ။ အကယ်၍ သင်မလုပ်လျှင်၊ ငှက်သည်အန္တရာယ်ကင်းသောချက်ပြုတ်သည့်အပူချိန်တွင်ကြာမြင့်စွာထိုင်ပါလိမ့်မည်။ ကြက်ဆင်တစ်ကောင်ကိုကျပ်နေလျှင် ၁၆၂ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိချက်ပြုတ်ရန်လိုအပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ငှက်မှအမြှောက်များဝင်ရောက်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကြိုတင်အလွယ်တကူလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ဆေးပစ္စည်းဟာကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြင်ဆင်ပါ၊ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖုံးထားပါ၊ ၄၈ နာရီအထိရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ပါ။
မုန့်ဖုတ်ရန်မုန့်ဖုတ်ခြင်းမပြုမီအနည်းဆုံးမိနစ် ၃၀ တွင်ရေခဲသေတ္တာမှဖယ်ထုတ်ပါ။ ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်းပြင်ဆင်ပါ (ရေခဲသေတ္တာထဲမှအအေးနေလျှင်နောက်ထပ်မိနစ်အနည်းငယ်ထပ်ထည့်ရန်လိုအပ်နိုင်သည်) ။
ဘာ casserole နှင့်အတူကောင်းသောသွားသည်
လူတိုင်းကြက်ဆင်ညစာစားကြွင်းစားကျန်ကြိုက်တယ်။ တူရကီညစာစား သို့မဟုတ်ပူကြက်ဆင်အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ကသူတို့ကိုပျော်မွေ့ရန်ကျွန်ုပ်၏အကြိုက်ဆုံးနည်းလမ်းများဖြစ်သော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံသင်သူတို့မကောင်းသောအချိန်တွင်သူတို့ကိုမရရှိနိုင်ပါ။ ကြက်ဆင် stuffing ကောင်းစွာအေးခဲအဖြစ်မကြောက်ပါနဲ့! ၎င်းကိုရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ပြီးလများစွာကြာသင့်သည်။
stuffing ကိုပြန်လည်အပူပေးရန်, အပူချိန် ၃၅၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တွင် ၃၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိပါက၎င်းကိုခြောက်သွေ့မှုမှကာကွယ်ရန်ဟင်းရည်အနည်းငယ်နှင့်မိနစ် ၂၀ ခန့်ထားပါ။
ပြင်ဆင်ချိန်ဆယ့်ငါး မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်55 မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်၁ နာရီ ၁၀ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၁၂ စားသုံးခြင်း စာရေးသူHolly Nilsson ဒီဂန္ထုပ်ပစ္စည်းချက်ပြုတ်နည်းကဘယ်မုန့်ညက်မှမပြီးပြည့်စုံမည်။ ဆလရီ၊ ကြက်သွန်နှင့်ထောပတ်တို့ကိုပေါင်ခြောက်သောပေါင်များဖြင့်လွှင့်ပစ်သည်။ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢နှစ် ကြက်သွန်နီအသေးများ အရက်
▢၄ ရိုးတံ တရုတ်နံနံ အရက်
▢⅔ ခွက် ထောပတ်
▢1 ½ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ကြက်ဘဲ သို့မဟုတ်½လက်ဖက်ရည်ဇွန်းမြေမှပညာရှိ
▢၁၂ ခွက် ပေါင်မုန့်
▢3-4 ခွက် ကြက်သားဟင်းရည်
▢နှစ် ဇွန်း လတ်ဆတ်သော parsley
▢၁ ဇွန်း လတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက် Sage, စမုန်ဖြူ, Rosemary
အလယ်အလတ်အပူကျော်ကြီးမားတဲ့ skillet အတွက်ထောပတ်အရည်ပျော်။ ကြက်သွန်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ကြက်သွန်နီတို့ကိုထည့်ပါ။ နူးညံ့သော (အညိုမလို) အထိ ၁၀-၁၂ မိနစ်အထိအလယ်အလတ်အနိမ့်ဖြင့်ချက်ပြုတ်ပါ။
အိုးတလုံးထဲ၌ပေါင်မုန့်တုံးထည့်ပါ။ ကြက်သွန်အရောအနှော၊ parsley နှင့်လတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုထည့်ပါ။
Cube များစိုစွတ်နေမည်ဖြစ်သော်လည်းညင်ညင်သာသာမထိမခွာမှီတိုင်အောင်ဟင်းရည်အပေါ်သို့လောင်းပါ။ သင်ဟင်းရည်အားလုံးမလိုအပ်ပေ။ မြည်းစမ်းဖို့ဆား, ငရုတ်ကောင်းနှင့်အတူရာသီ။
၃၅ မိနစ်ခန့်ဖုတ်ပါ၊ နောက်ထပ် ၁၀ မိနစ်ဖုတ်ရမည်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များတွင် Rosemary ကိုသုံးလျှင်ကြက်သွန်နီ / ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ချက်ပြုတ်ပါ။ ကြက်ဆင်ကိုမြုပ်ရန်အနည်းဆုံး ၄၅ မိနစ်ခန့်ကိုအအေးခံရန်အအေးခံရန်။ ရှေ့သို့လုပ်ရန် ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းပြင်ဆင်ပါ၊ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖုံးအုပ်ထားပါ၊ ၄၈ နာရီအထိရေခဲသေတ္တာတွင်ထားပါ။ မုန့်ဖုတ်ရန်မုန့်မဖုတ်မီအနည်းဆုံးမိနစ် ၃၀ တွင်ရေခဲသေတ္တာမှဖယ်ထုတ်ပါ။ ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းပြင်ဆင်ပါ (ရေခဲသေတ္တာထဲမှအအေးနေလျှင်နောက်ထပ်မိနစ်အနည်းငယ်ထပ်ထည့်ရန်လိုအပ်နိုင်သည်) ။
သော့ချက်စာလုံးကြက်ဆင် stuffing စာရွက် သင်တန်းညစာ ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုကော်ပီကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝပိတ်ပင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။
ဒီစူပါ Stuffing စာရွက် REPIN